Shariif Xasan o ka Degay Kismaayo raacayna Diyaarad Jabisay Cunaqatayntii hawada e farmaajo , Shir Jaraa,idna Qabtay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Shariif Xasan o ka Degay Kismaayo raacayna Diyaarad Jabisay Cunaqatayntii hawada e...
Shariif Xasan o ka Degay Kismaayo raacayna Diyaarad Jabisay Cunaqatayntii hawada e farmaajo , Shir Jaraa,idna Qabtay
Madaxweynahii hore ee Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay iney Kismaayo u tageen sidii ay dadka reer Jubballand ula qaybsan lahaayeen farxada iyo damaashaadka dib u doorashada Axmed Madoobe.
Shariif Xasan oo ka mid ahaa masuuliyiin iyo xildhibano maanta Kismaayo ku tegay dayuurad jebisay xayiraadii ay ku soo rogtay DF ayaa ku amaanay Axmed Madoobe masuul wax wanaagsan u qabtay reer Jubbaland taasna ay sababtay inay shacabka reer Jubbaland mar kale dib u soo doortaan.
Shariif Xasan wuxuu intaas ku daray in cunaqabataynta la saaray dadka reer Jubbaland ay tahay mid aan qabanin oo sharciga aan wax raad ah ku lahayn.
“Hawadii Soomaaliya ka maqnaan jirtay oo mudada badan ay u qeylinaayeen ee hanaloo soo celiyo ay lahaayeen in iyada hadda xabad looga dhigo oo lagula dagaalamo aad baan uga xunahay, waxaana leenahay ka raali ahaada wax idin qabta maaha” ayuu yiri Shariif Xasan.
Waxaa uu sheegay in Axmed Madoobe uu mar walba u taagan Midnimada iyo wadajirka ummada wuxuuna dowlada federaalka Somalia ugu baaqay wixii kala aragti duwanaan ah lagu dhameeyo wadahadal.
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Guuleed oo ka mid ahaa xubnaha gaaray Kismaayo ayaa isna cunaqabateynta Magaalada Kismaayo dowladda saartay ku tilmaamay Gardaro.
Guuleed waxaa uu sheegay inay tahay wax laga xumaado in dowlad Soomaaliyeed ay cunaqabateyn saarto qeybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, isagoo ugu baaqay dowlada inay soo afjarto khilaafka kala dhaxeeya Maamulka Jubbaland.
Previous articleMaalqabeen boqolaal Muslimiin ah isxambaar ku geeyay Canada
Next articleDeg Deg, Mayor Magaalo wayn o Somaliland ku tala o Dumiyay Gurigii Mayorkii u xilka kala Wareegay,